Na-atụgharị uche taa na ọrụ gị ịkọrọ ndị ọzọ Oziọma ahụ | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Na-atụgharị uche taa n’ọrụ gị isoro ndị ọzọ kerịta ozi ọma ahụ
Ọ họpụtara mmadụ iri na abụọ, ndị ọ kpọkwara Ndịozi, ka ha nọnyere ya ma zipụ ha ikwusa ozi ọma na inwe ikike ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ. Mak 3: 14-15
Ndịozi iri na abụọ ahụ bụ ndị Jizọs buru ụzọ kpọọ ma ziga ha izi ozi n'ike. Ikike ha nyere bụ maka ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ. Ma olee otú ha si mee ya? Ọ dị mma ịmara na ikike ha natara n'aka ndị mmụọ ọjọọ so na akụkụ nke ha ikwusa ozi ọma. Ma obu ezie na onodu ufodu edere n’Akwukwo Nso nke ndi ozi ndi nchupu ndi mo ojo site n’inye ha iwu, ekwesiri ighota na ikwusa ozioma site n’ikike nke Kraist nwere ihe di nkpa n’ichupu ndi mo ojo.
Ndị mmụọ ọjọọ bụ ndị mmụọ ozi dara ada. Mana ọbụlagodi na ọnọdụ ha dara ada, ha na-ejigide ikike okike ha nwere, dịka ike ịkpa ike na ịtụ aro. Ha na-anwa iso anyị kwurịta okwu iji duhie anyị ma kewapụ anyị na Kraịst. O doro anya na ezigbo ndị mmụọ ozi na-emekwa otu ihe ahụ maka ọdịmma anyị. Dịka ọmụmaatụ, ndị mmụọ ozi na-eche anyị nche na-anwa ịkọrọ anyị eziokwu nke Chineke na amara Ya mgbe niile. Ọgụ ndị mmụọ ozi na-eme maka ezi ihe na ihe ọjọọ dị adị yana Ndị Kraịst, anyị kwesịrị ịmara maka eziokwu a.
Otu ụzọ kacha mma iji soro Setan na ndị mmụọ ọjọọ ya bụ ịnụrụ Eziokwu ma jiri ikike nke Kraịst kwusaa ya. Ọ bụ ezie na enyere ndịozi ikike pụrụ iche maka nkwusa ha, Onye Kraịst ọ bụla, site na Baptism na Nkwenye ha, nwere ọrụ nke ịkpọsa ozi nke Oziọma ahụ n'ụzọ dị iche iche. Site n’ikike a, anyi aghaghi igbalisi ike weputa alaeze Chineke Nke a gha enwe mmetuta n’atulata ochichi nke Ekwensu.
Na-atụgharị uche taa n’ọrụ gị isoro ndị ọzọ kerịta ozi ọma ahụ. Oge ụfọdụ a na-eme ya site n'iji ozi doro anya kerịta ozi nke Jizọs Kraịst, na oge ndị ọzọ a na -ekekọrịta ozi ahụ karịa site n'omume na omume ọma anyị. Ma e nyere Onye Kraịst ọ bụla ọrụ a ma na ha ga-amụta iji mezuo ọrụ ahụ na ezigbo ikike, ebe ha maara na ka a na-egosipụta ikike nke Kraịst, na alaeze Chineke na-aba ụba ma na-emeri ọrụ nke ajọ onye ahụ.
Onyenwe m nke pụrụ ime ihe nile, ana m ekele gị maka amara ị nyere m ikwusa eziokwu nke ozi nzọpụta gị nye ndị m na-ezute kwa ụbọchị. Nyere m aka ịrụzu ọrụ m nke ikwusa ozi ọma na okwu ọnụ na n'omume yana ime nke a site n'ike Gị nke dị nwayọ ma dịkwa ike nke I nyere m. Anam enyefe onwe m ijere Gi ozi, Onye-nwe-ayi. Mee m otu masiri gi. Jesus ekwere m na gị.